2021-06-25 @ 19:07 in Eritreritra mandalo
Matetika dia tsy olana ho an'ny olona tena matanjaka sy ampy sakafo tsara ary tsy taizan'aretina ny Covid. Tsy tsapan'izy ireny akory hoe efa voa izy satria indraindray tsy misy soritr'aretina akory.
Tsy mahagaga noho izany raha tsy marisika amin'ny fiarovana ny ankamaroan'ireo sokajin'olona ireo. Anatin'izany ireo filoham-pirenena tanora sy matanjaka. Tsy mila atao vakisiny izany izy ireny raha resaka fiarovan-tena fotsiny no jerena.
Ny olana fotsiny izao dia tsy resaka olon-tokana izy ity fa resaka itambarana. Raha tsy tiana hiparitaka sy hiverimberina ny aretina dia mila miaro tena daholo ny rehetra na dia ireo dfq matoky fa tsy ho lavon'ilay aretina aza. Raha sendra mitondra ny tsimok'aretina mantsy ianao nefa tsy misy fiantraikany eo aminao ilay izy nefa ianao tsy miaro tena dia ho voa daholo ireo mifandray aminao... ary izy ireo mety marefo, be taona, taizan'aretina, sns.
Io fitsinjovana ny hafa io angamba no tsy tsapan'ny sasany miteny hoe tsy hanao vakisiny mihitsy. Sarotra be nefa ny hifandresy lahatra raha ohatra ka efa tsy mba zatra mitsinjo ireo marefo hatramin'izay ianao na tsy nobeazina tamin'izany.
Ny hany azo atao angamba dia ny maniry hoe raha tsy hatao vakisiny ihany dia tokony ho voa malaky satria araka ny fikarohana dia mitovy amin'ny vita daozy iray amin'ny vakisiny ny olona efa voan'ilay aretina.